September 28, 2019 September 27, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on नेपाल जिम्बावेसँग ५ विकेटले पराजित
काठमाडौँ — नेपाली क्रिकेट टोली सिंगापुरमा जारी त्रिकोणात्मक ट्वान्टी–२० शृंखला अन्तर्गत पहिलो खेलमा टेष्ट मान्यताप्राप्त टोली जिम्बावेसँग ५ विकेटले पराजित भएको छ । शुक्रबार साँझ सिंगापुरको इन्डियन एसोसियसन क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको १ सय ३३ रनको लक्ष्य सिंगापुरले ५ विकेट गुमाएर ११ बल अगावै भेट्टायो । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालको सुरुआत राम्रो हुन सकेन […]
September 27, 2019 September 26, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on टेनिसमा कमल थापाको दुबै हातमा लड्डु
राजनीति मात्र नभएर टेनिस कोर्टका पनि भेट्रान खेलाडी कमल थापाले पोखरामा दोहोरो उपाधिमाथि कब्जा जमाएका छन्। नेपालका भेट्रान टेनिस खेलाडी थापाले पोखराको टेनिस कोर्टमा बुधबार ५५ वर्षमाथिको उमेर समूहमा एकल र युगल जोडीको उपाधि जितेका हुन्। राजनीतिबाट बिश्राम लिएर सुटुक्क टेनिस खेल्न पोखरा आएका उनले भारतीय खेलाडी सन्जय कुमारलाई ६–४, ६–२ को सोझो सेटमा हराए। […]
६ असोज, काठमडौं । दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) ट्वान्टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकबाट शुरु हुने भएको छ । आयोजक क्विन्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता कात्तिक २६ गतेबाट मंसिर ७ गतेसम्म चल्ने जानकारी दिएको हो । पोखरा क्रिकेट रंगशालामा हुने प्रतियोगितामा पहिलो संस्करणकै ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पीपीएलमा विराटनगर […]
बार्सिलोनालाई हराएर ग्रेनेडा शीर्षमा
September 22, 2019 September 22, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on बार्सिलोनालाई हराएर ग्रेनेडा शीर्षमा
म्याड्रिड — बार्सिलोनाले आफ्नो पुराना र नयाँ सबै स्टार खेलाडी उतारे पनि शनिबार राति स्पेनी ला लिगामा ग्रेनेडासँग २–० को हारबाट जोगिन सकेन । पूर्णतः फिट हुन बाँकी लियोनल मेसी र अन्सु फाटी वेञ्चबाट आएर खेले । ग्रेनेडाले भने रोमन एजिजको गोलले अग्रता लिएको थियो । अरटुरो भिडालले बल ह्यान्ड गरेपछि प्राप्त पेनाल्टीमा अल्भारो भाडिलोले […]
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा, कुशल र इसान पहिलोपटक टोलीमा
September 20, 2019 September 29, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा, कुशल र इसान पहिलोपटक टोलीमा
बिहीबार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। सेप्टेम्बर २७ देखि अक्टोबर ३ सम्म सिंगापुर क्रिकेट संघको आयोजनामा हुने सिंगापुर र जिम्बाबेसँगको त्रिकोणात्मक शृंखला र लगत्तै ओमानमा हुने पाँच देशको शृंखलाका लागि नेपाली टोली घोषणा भएको हो। बिहीबार १५ सदस्यीय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। कुशल मल्ल र इसान पाण्डे पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। […]
August 30, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on नेपाल एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजनको सजिलो समूहमा
नेपाल एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन २०१९ को क्रिकेट प्रतियोगिताको सजिलो समूहमा परेको छ। मलेसियामा ३० जुन देखी १० जुलाई सम्म हुने प्रतियोगिताको विजेताले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता देशहरु सम्मेलित यू–१९ विश्वकप खेल्नेछ। एसियन क्रिकेट काउन्सिलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपाल, सिंगापुर, म्यानमार र चीन रहेका छन्। यी देशहरु नेपालभन्दा तुलनात्मक रुपमा निकै […]
बलियो ताइपेईसँग नेपालको बराबरी
June 6, 2019 June 12, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on बलियो ताइपेईसँग नेपालको बराबरी
बलियो ताइपेईसँग नेपालको बराबरी दोस्रो अन्तराष्ट्रिय खेल खेलेका अभिशेक रिजालको गोलसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बलियो चाइनिज ताइपेईलाई १–१ को बराबरीमा रोकेको छ। NIC ASIA विश्वकप छनोट २०२२ को तयारीका क्रममा आफूभन्दा ३६ स्थानमाथि रहेको चाइनिज ताइपेईलाई नेपालले उसैको मैदानमा बराबरीमा रोकेको हो। पहिलो हाफमा पछि परेपनि दोस्रो हाफमा नेपालले गोल फर्काएको थियो। ताइपेईमा जारी […]
June 4, 2019 June 3, 2019 khabarsansaarLeaveaComment on विश्वकप क्रिकेटको अपडेट हाम्रो पात्रोमा
१७ जेठ, काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटको अपडेट नेपाली एप हाम्रो पात्रोमा पनि उपलब्ध हुने भएको छ । हाम्रो पात्रोले विश्वकप क्रिकेट २०१९ को हरेक बलको अपडेट तथा प्रेडिक्ट एण्ड विन सहितको नयाँ अपडेट सार्वजनिक गरेको छ । यो अपडेट गुगल प्लेस्टोरबाट लिन सकिनेछ । ‘विश्वकप फुटबल सन् २०१४ तथा २०१८ पछि क्रिकेटको कुनै पनि संस्करणमा […]
कुवेतले दियो १५८ रनको लक्ष्य, रोहितको उत्कृष्ट बलिङ
April 18, 2019 April 18, 2019 Khabar SansaarLeaveaComment on कुवेतले दियो १५८ रनको लक्ष्य, रोहितको उत्कृष्ट बलिङ
kuwait give158-runs-rohits-excellent-bowling ५ वैशाख, काठमाडौं । यू–१९ विश्वकप छनोटको अन्तिम खेलमा कुवेतले नेपाललाई १५८ रनको लक्ष्य दिएको छ । नेपालले केहीबेरमा जवाफ ब्याटिङ गर्नेछ । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कुवेतले अन्तिम दुई बल बाँकी छँदा सबै विकेट गुमाएर १५७ रन बनायो । नेपालका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले उत्कृष्ट बलिङ गरे । ३ ओभर बलिङ गरेका […]
यू-१९ विश्वकप छनोटः नेपालको भाग्य ओमानको हातमा!
April 16, 2019 April 16, 2019 Khabar SansaarLeaveaComment on यू-१९ विश्वकप छनोटः नेपालको भाग्य ओमानको हातमा!
nepal U19 Worldcup selection ३ वैशाख, काठमाडौं । मलेसियामा जारी यू-१९ विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा नेपालले शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ । तर, दुःखको कुरा यो छ कि उत्कृष्ट प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल विश्वकपमा छनोट नहुने सम्भावना बढ्दोछ । चार खेल खेल्दासम्म नेपालले तीनमा जित र एकमा हार व्यहोर्दै ६ अंक बटुलेको छ । यूएईसँग भएको खेलमा भने […]
Last 365 Days Visits: 20,928